ah, Switzerland, a mara mma na udo mba nọ ọdụ comfortably Italy, France, na Germany. Okwesiri nleta iji hụ ihe kpatara eji etinye Switzerland mgbe niile dịka otu n'ime mba kachasị nwee obi ụtọ n'ụwa. Ya mere, ihe i chere nke mgbe ị na-eche 'Switzerland '? M guessing snow-capped ọnụ ọnụ, cheese, na chocolate. A ga-enwe oge buru chocolate na fondue gị Swiss vacay, ma jide n'aka na-agụnye niile nke omenala, eke, na akụkọ ihe mere nke a pụta ìhè mba nwere na-enye. Site The Epic ụgbọ okporo ígwè agafe na ugwu treks ka agha-idobe ije, Switzerland nwere ihe na-enye ọ bụla ụdị njem n'oge ọ bụla oge. Ka anyị gbarie ụfọdụ nke kwesịrị-dos gị njem Switzerland.
Nke a nnukwu nnukwu onuala nwere a ọdọ na oriri ulo ime nwere ike n'ezie nabata banyere 400 ndị mmadụ na a ga-akwụ ụgwọ maka ihe dị ka na-emekpa dinners, ọzọ, na agbamakwụkwọ. Ihe e Njirimara djs, dancers, na egwú. Ị nwere ike na-a akụkọ ihe mere eme okporo ígwè site Vitznau ka a pụrụ iche na-aga. Ha website bụ naanị na German, mana ị nwere ike iji Google Chrome iji lelee weebụsaịtị ọ bụla asụsụ mba ọzọ maka ozi njem ndị ọzọ - ị nwere ike ịgbanye ntụgharị akpaka!
Ọ bụla isi obodo nwere a akụkọ ihe mere eme ma ọ bụ ihe ngosi nka sayensị nke di egwu maka imebi obodo na ụbọchị mmiri. Otú ọ dị, ụfọdụ ebe nwere n'ezie pụrụ iche ngosi ihe mgbe ochie na nanị na-ekwesịghị Agbaghara. Ndị si n'ụwa nile ileta H.R. Geiger ngosi nka na Gruyere.
Fondue bụ otu n'ime ndị kasị ama efere na-abịa nke Switzerland, na nke a bụ ihe ọ bụla mberede. Ndị a na-eri gbazee cheese si a anyị na ite ruo ọtụtụ narị afọ na n'ebe ọdịda anyanwụ na-asụ French akụkụ nke Switzerland. Otú ọ dị, ke 1930s Switzerland Cheese Union aggressively ahịa na efere a ma mba na mba, na-ekwuwapụta ya dị ka nri mba nke Switzerland dị ka ụzọ isi ree oke mba ahụ cheese. Ma anyị nwere obi ụtọ na ha mere, onye na-adịghị amasị gbazee cheese na achịcha? Ụzọ gị fondue na a akọrọ mmanya ọcha, Gbaa mbọ hụ na ọ bụghị abụọ-itinye!
ọ bụ oge maka ezigbo Ihe mere ị ga-eji aga Switzerland – chọkọletị! Switzerland bụ nnọọ ama n'ihi na ya chocolate, ma ị ga - ahụ ọtụtụ ndị chocolatiers okomoko n'okporo ámá n'akụkụ ebe niile na mba ahụ, Otú ọ dị, Zurich bụ ma ama n'ihi na ya ọtụtụ chocolate tours. Enwere njem nlegharị na chocolate dabara mmefu ego ọ bụla! I nwere ike iburu Satọde ụtụtụ na-eje ije njegharị nke na-agwakọta isi obodo na ụfọdụ nke kacha mma chọkọletị na obodo. I nwere ike gbalịa na-ewere a njem nke a obere chocolate factory, na ahụmahụ na-eme gị onwe gị chocolate mmanya. N'ihi na a n'ezie dara oké ọnụ n'oge okpomọkụ ọrụ, iri a chocolate tour site ụgbọ mmiri na Lindt na Sprungli factory.
Ọ dị mma, ugbu a na ị jupụta na chocolate na cheese, ọ bụ oge na-akpụ akpụ ọzọ! The Swiss ugwu bụghị naanị n'ihi na oyi ski! Enwere breathtaking okpomọkụ hikes na ị nwere ike ịga na niile gburugburu mba, ma Jungfrau region kwesịrị elu gị ịwụ ndepụta. The Jungfraujoch bụ kasị elu mgbe na Europe na 3,454 mita (~ 11.330 ụkwụ) na echiche na-ekwesịghị Agbaghara. Enwere ụgbọ okporo ígwè ga-akpọga gị ebe ahụ kwa afọ ma ọ bụrụ na ị bụghị nnukwu njem, ma ọ bụ na ị gara na n'oge oyi. Ọ bụrụ na ị bụ maka a ịma aka lelee ụfọdụ n'ime ndị a ụzọ gasị na mpaghara. Ọtụtụ n'ime ụzọ gasị nwere ezi nri na onunu iche n'ụzọ, otú echegbula, ị ga-adịghị mkpa na-ike ike na ọ!
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị a n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-experiences-switzerland-winter-summer%2F%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)